Joe Biden oo ka laabtay Amaro uu soo saaray Trump - Radio Risaala: Somali News Online
Magaalada laas-caanood Gobolka Sool waxaa Maanta gaaray wafdi uu hoggaminayay Wasiirka Gaashandhiga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo uu wehelinayo Taliyaha Guud ee Ciidanka Somaliland,…
Home Caalamka Joe Biden oo ka laabtay Amaro uu soo saaray Trump
Wuxuu howshiisa ka billaabay in uu 10-ka maalmood ee ugu horreysa soo saaro wareegtooyin madaxweyne.
Mid ka mid ah qodobbada ugu waaweyn ee uu wareegto kasoo saaray waa sharciga muranka dhaliyay ee mamnuucista safarka lagu tagi karo Mareykanka, ee dalalka qaar uu kusoo rogay madaxweynaha isaga xilka uu kala wareegay ee Donald Trump.
Qodobka ku saabsan qaadidda xayiraadda safarrada waxaa dalalka uu saameynayo ka mid ah Soomaaliya. arrintanna waxaa rajo yeelan doona dad badan oo qaxootinnimo u rajeynayay in ay ku aadaan Mareykanka iyo kuwo baasaboorka Soomaaliga ah ku safri kara.
Previous articleWariyeyaal lagu xiray Magaalada Dhuusamareeb
Next articleCiidamada liyuu boolis oo kaxeystay rag ay dhawaan ka xireen Gudaha Soomaaliya
Magaalada laas-caanood Gobolka Sool waxaa Maanta gaaray wafdi uu hoggaminayay Wasiirka Gaashandhiga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo uu wehelinayo Taliyaha Guud ee Ciidanka Somaliland,...